रश्मि आचार्य नेकपाभित्र जारी विवाद कसरी निरूपण होला ? तस्बिर प्रस्ट छैन । विवाद साम्य हुन नसकी एकता भङ्ग भयो भने त्यसले कस्तो परिणाम ल्याउला ? उत्तर सहज छैन । नेकपाको एकता
दिपेश खड्का नेपालको इतिहासमा राजतन्त्र, नि,रं कु शतन्त्र, प्रजातन्त्र, पञ्चायत तन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा भारतीय शासकहरुको अधिनमा रहेको नेपालले भारतको गुलामी गरेर तथा उसकै नियन्त्रणमा सयौं
नेकपा भित्रको एमालेमा प्रचण्डको प्रवेश!
नयाँ नक्सा प्रकरण यता नेपाली राजनीतिको पर्दा अगाडि एउटै कित्ता देखिँदा जनमानसमा नयाँ उत्साह नयाँ उर्जाको अनुभुती छाएको थियो! यद्यपि राजनीतिको “राज-नीति” बिल्कुलै अकल्पनीय रुपमा देखापर्यो! खासगरी नयाँ नक्सा प्रकरण
कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव नेपाललाइ खुला पत्र !!
-मोनिष पोखरेल आदरणीय कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव नेपाल, सर्वप्रथम नेकपालाई यो उचाई सम्म पुर्याउन हजुरहरुले गर्नु भएको योगदान तथा मेहनतको लागि धन्यवाद दिन चाहान्छु। हजुरहरुको साथ र सक्रियताले आगामी
स्थायी कमिटीको ऐजेण्डाः प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कि अतिक्रमण भूमी फिर्ता?
उपेन्द्र केसी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीभित्र फेरी एकपटक संकसमा पारिएको छ । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट उनलाई हटाउन वर्षै पहिलेदेखि खेलिदै आएको गुप्तखेलहरु अहिले आएर सतहमा देखिन थालेकोछ ।